Laparoscopic Nissen Fundoplication (အစာချေရည်ဆန်တက်ရောဂါကုသသော အစာအိမ်မှန်ပြောင်းထည့်ခွဲစိတ်ခြင်း) - Hello Sayarwon
အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်|အခြေခံအကြောင်းရင်းကို သိရှိခြင်း|ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း|ခွဲစိတ်ကုသခြင်း|ခွဲစိတ်ပြီးနောက် အခြေအနေ
Acid reflux က သင့်ကို ရင်ပူပြီး လေပူတက်ခြင်း၊ ခံတွင်းထဲ အက်ဆစ်ဖောက်ခြင်းတို့ ဖြစ်လာနိုင်စေပါတယ်။ အက်ဆစ်က အစာပြွန်လမ်းကြောင်းကို ရောင်ရမ်းစေပြီး အနာရွတ်တွေ ဖြစ်စေပါတယ်။ ဆေးသောက်နေစဉ်တောင် ရောဂါလက္ခဏာတွေ ဆက်ပြနေမယ် ဆိုရင်တော့ ခွဲစိတ်ကုသမှု ခံယူရပါလိမ့်မယ်။
Acid reflux ဆိုတာဘာလဲ?
Acid reflux ဆိုတာက အစာအိမ်ထဲက အက်ဆစ်တွေက အစာပြွန်အထိ မြင့်တက်လာတဲ့ အခြေအနေ တစ်မျိုးပါ။ ဒါက အစာအိမ်နဲ့ အစာပြွန်ကြားက အဆို့လေး အလုပ်သေချာ မလုပ်တော့တဲ့အခါ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ Acid reflux က ရင်ပူစေပြီး လေပူတက်စေတဲ့အပြင် ပါးစပ် အနောက်ပိုင်းတွေမှာ အက်ဆစ် ဖောက်လာစေနိုင်ပါတယ်။
ခွဲစိတ်မှုရဲ့ အကျိုးတွေက ဘာတွေလဲ?
သင့်ကို ဒီ Acid reflux ကြောင့် ခံစားနေရတာတွေကို သက်သာသွားစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်အချိန်မှာ ဒီ Anti- Acid reflux ခွဲစိတ်မှုကို ပြုလုပ်သင့်သလဲ ?
သင့်ဆရာဝန် အနေနဲ့ သင့်မှာ အောက်ပါ ရောဂါ လက္ခဏာတွေ ပေါ်လာတဲ့အချိန် ဒီခွဲစိတ်မှုကို လုပ်ခိုင်းမှာပါ။
သင့်အနေနဲ့ ဒီဆေးတွေ ဆက်မသောက်ချင်တော့ခြင်း
သင့်ရဲ့ အစာပြွန်မှာ ပြင်းထန်တဲ့ ပြဿနာတွေ ဖြစ်လာခြင်း၊ ဥပမာ – အစာပြွန် ကျဉ်းလာခြင်း၊ အနာရွတ် ဖြစ်လာခြင်း၊ ပြည်တည်လာခြင်း၊ သွေးထွက်လာခြင်း
သင့်မှာ reflux ရောဂါ ဖြစ်နေခြင်း၊ ဥပမာ – အဆုတ်ရောင်ခြင်း၊ နာတာရှည် ချောင်းဆိုးခြင်း၊ အသံပြောင်းခြင်း
ဒီ Anti – acid reflux ခွဲစိတ်မှုကို သင့်အစာအိမ်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုက ရင်ခေါင်းမှာ ညှပ်နေတာဖြစ်ဖြစ်၊ လိမ်နေတာဖြစ်ဖြစ် စတဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာလည်း အသုံးပြုပါတယ်။
Anti – acid relux ခွဲစိတ်မှု မပြုလုပ်ခင် ဘာတွေ သိသင့်လဲ?
ဒီ ခွဲစိတ်မှုရဲ့ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ဆိုးကျိုးတွေကတော့
အသက်ရှူခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ချို့ယွင်းခြင်း၊ ဥပမာ – အဆုတ် ယိုယွင်းခြင်း၊ ဒါကတော့ ဖြစ်တာရှားပါတယ်။
အစာအိမ်၊ အစာပြွန်၊ အသည်းနဲ့ အူ စတာတွေကို ထိခိုက်မိခြင်း၊ ဒါကလည်း ဖြစ်တာရှားပါတယ်။
လေပွခြင်း၊ ဒါကသင့်ရဲ့ အစာအိမ်မှာ လေတွေ ဒါမှမဟုတ် အစာတွေနဲ့ ပြည့်နေပြီး သင့်အနေနဲ့ အဲဒီ ဖိအားတွေကို လေတက်ခြင်း၊ အန်ခြင်းတွေနဲ့ မလျှော့ချနိုင်တဲ့အခါ ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒီရောဂါ လက္ခဏာကတော့ လူတော်တော်များများမှာ ဖြစ်ပြီးရင် တဖြည်းဖြည်း သက်သာလာပါတယ်။
သင်အစာကို မျိုချတဲ့အခါ နာကျင်ပြီး မျိုချရခက်ခြင်း၊ ဒါကို Dysphagia လို့ခေါ်ပါတယ်။ လူအများစုမှာတော့ ဒါက ခွဲစိတ်ပြီး ၃ လ အကြာမှာ ပျောက်သွားတတ်ပါတယ်။
အစာအိမ် အစိတ်အပိုင်းက ရင်ဘတ်ဆီ ပြန်တက်ခြင်း၊ reflux ပြန်ဖြစ်ခြင်း။
ခွဲစိတ်မှု မလုပ်ဘဲ တခြား သက်သာစေမယ့် နည်းလမ်းတွေ ရှိလား?
အစာအိမ်ထဲက အက်ဆစ်တွေကို လျှော့ချပေးနိုင်တဲ့ ဆေးတွေကတော့ သင့်ရဲ့ ရောဂါ လက္ခဏာတွေကို ထိန်းချုပ်ပေးပြီး ရောင်ရမ်းခြင်းကိုလည်း လျှော့ချပေးပါတယ်။
ဆေးသောက်နေလျှက်နဲ့ ရောဂါက ပိုဆိုးလာတာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ သင့်အနေနဲ့ တစ်သက်လုံး ဆေးသောက် နေရတာ ထက်စာရင် ခွဲစိတ်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် စတဲ့ အခြေအနေ မျိုးတွေမှာ ဆိုရင်တော့ ခွဲစိတ်မှုကို လုပ်ရပါလိမ့်မယ်။
Laparoscopic nissen fundoplication ခွဲစိတ်မှု မပြုလုပ်ခင် ဘာတွေ လုပ်သင့်လဲ?
ခွဲစိတ်မှုကိုတော့ မေ့ဆေးပေးပြီး ပြုလုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာဝန်က ခွဲစိတ်မှု မစခင် လိုက်နာရမယ့် အချက်တွေကို ပေးပါလိမ့်မ်။ ဥပမာ – ခွဲစိတ်မှု မစခင် နာရီတွေမှာ အစာ စားလို့ ရ၊ မရဆိုတာမျိုးပေါ့။ များသောအားဖြင့် ခွဲစိတ်မှု မစခင် ခြောက်နာရီမှာ ဝမ်းသွားထားရပါမယ်။ ခွဲစိတ်မှု မစခင် နာရီအနည်းငယ်အထိ ကော်ဖီလိုမျိုး အရည်တွေကို သောက်လို့ ရနိုင်ပါသေးတယ်။
Laparoscopy nissen fundoplication ခွဲစိတ်မှုရဲ့ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တွေက ဘာတွေလဲ?
ခွဲစိတ်မှုကို မေ့ဆေးပေးပြီး ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီး တစ်နာရီကနေ နှစ်နာရီလောက် ကြာပါတယ်။
ခွဲစိတ်ဆရာဝန်က သင့်ရဲ့ဗိုက်မှာ ခွဲရာလေးတွေ ပြုလုပ်ပြီး မှန်ပြောင်းနဲ့အတူ တခြား ခွဲစိတ်ခန်းသုံး ကိရိယာတွေ ထည့်ပြီး ခွဲစိတ်မှုကို ပြုလုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ခွဲစိတ်ဆရာဝန်က သင့်ရဲ့ ရင်ဝမ်းခြား ကြွက်သားရဲ့ အစာပြွန်ဖြတ်သွားတဲ့ အပေါက်ကို ကျဉ်းစေဖို့ ချုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့က သင့်အစာအိမ် အပေါ်ပိုင်းကို အစာပြွန်အောက်ပိုင်းမှာ ပတ်ပြီး ချုပ်ရပါလိမ့်မယ်။
ဒီခွဲစိတ်မှု အပြီးမှာ ဘာလုပ်သင့်လဲ ?
ခွဲစိတ်ပြီး နောက်တစ်နေ့မှာ သင် အိမ်ပြန်နိုင်ပါပြီ။ ခွဲစိတ်ပြီး သုံး၊ လေးပတ် အကြာမှာ သင့်ခွဲစိတ်မှု အခြေအနေနဲ့ သင့်အလုပ်အပေါ် မူတည်ပြီး သင်အလုပ်သွားနိုင်ပါပြီ။
လေ့ကျင့်ခန်း မှန်မှန်လုပ်ခြင်းက သင့် ပုံမှန်လှုပ်ရှားမှုတွေဆီမြန်မြန်ရောက်အောင် ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်း မလုပ်ခင် သင့်ဆရာဝန်ဆီက အကြံတောင်းပါ။
ခွဲစိတ်မှုအပြီးမှာ သင့်ရဲ့ ရောဂါ လက္ခဏာတွေက ပျောက်ရင်ပျောက်၊ မပျောက်ရင် အများကြီး သက်သာသင့်ပါတယ်။
ခွဲစိတ်မှုအပြီး ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ရှုပ်ထွေးမှုတွေ ရှိလား?
ခွဲစိတ်မှုတိုင်းမှာ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ဆိုးကျိုးတွေတော့ ရှိပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကို ဒါတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
ခွဲစိတ်မှုကြောင့် ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ဆိုးကျိုးတွေကတော့ မေ့ဆေးအပေါ် မမျှော်လင့်ထားတဲ့ တုံ့ပြန်မှု ရှိခြင်း၊ သွေးထွက်လွန်ခြင်း၊ သွေးခဲခြင်း။
Laparoscopic nissen fundoplication ခွဲစိတ်မှုကြောင့် ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ရှုပ်ထွေးမှုတွေကတော့
အူမကြီး၊ ဆီးအိမ်၊ သွေးကြော စတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေ ထိခိုက်မိခြင်း။
သင့် အစာပြွန်၊ အစာအိမ်တို့တွင် အပေါက်ဖြစ်ခြင်း။
လအနည်းငယ် အစာမျိုချရ ခက်ခြင်း။
Reflux ရောဂါလက္ခဏာများ မသက်သာခြင်း။
သင့်အနေနဲ့ ခွဲစိတ်မှုကြောင့် ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ဆိုးကျိုးတွေကို မခွဲစိတ်ခင် ဆရာဝန် ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း လိုက်နာပြီးလျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ – မခွဲစိတ်ခင် ဝမ်းသွားခြင်း၊ တချို့ဆေးတွေ သောက်သုံးမှု ရပ်ခြင်း။
Laparoscopic Anti-Reflux (GERD) Surgery Patient Information from SAGES.
http://www.sages.org/publications/patient-information/patient- information-for-laparoscopic-anti- reflux-gerd- surgery-from- sages/. Accessed July 16, 2016.
Fundoplication Surgery for Gastroesophageal Reflux Disease (GERD).
http://www.webmd.com/heartburn-gerd/fundoplication- surgery-for-gastroesophageal-reflux- disease-gerd. Accessed July 16, 2016.
http://emedicine.medscape.com/article/1892517-overview. Accessed July 16,2016.